Thursday May 31, 2018 - 16:08:10 in Wararka by
Xiisad diblumaasiyadeed ayaa ka dhax oogantay wadamada Faransiiska iyo Burundi kadib markii diblumaasi Faransiis ah uu ihaano kula kacay shacabka Burundi.
Wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Burundi ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay ka xuntahay tallaabada uu qaaday safariiska faransiiska u fadhiya magaalada Bujambura.
Qisada sababtay in uu xumaado cilaaqaadka labada wadan ayaa soo bilaawday isbuucii hore kadib markii safaaradda Faransiiska ee Burundi ay 10 kamid ah xayawaanka Dameerka kasoo iibisay wadanka Tanzania kadibna ay uqeybisay dad beeraleey reer Burundi ah.
Laurent Delahos oo ah safiirka Faransiiska ufadhiya Burundi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in gargaar qaali ah ay siiyeen shacabka Burundi kaasi oo ah dameero.
"Land Cruiser ayaan gelinay Burundi kaas oo ah boqortooyada Xayawaanka" ayuu yiri Laurent Delahos, xaflad ka dhacday meel ku dhow magaalada Bujambura ayaa toban dameer lagu wareejiyay muwaadiniin Burundeys ah.
Safaaradda Faransiiska waxay sheegtay in qorshahan uu qeyb ka yahay gargaar ladoonayo in lagu caawiyo dadka fuqarada beeraleyda ah marka ay dalagyada kasoo goosanayaan beerahooda iyo marka ay dhulka keymaha kasoo guranayaan xaabada.
Dowladda Burundi oo tallaabadan si kulul ucambaareysay ayaa ku tilmaamtay ihaano iyo quursi ka dhan ah shacabkeeda, xayawaanka dameerka ayaan laga jecleyn Burundi iyo waddamo badan oo dhaca dhulka harooyinka qaaradda Afrika.
Dowladda Faransiiska oo maalgelisa duullaanka ciidanka Burundi ay ku qaadeen Soomaaliya ayaa sanadadii dambe aan la dhacsaneyn siyaasadaha uu ku dhaqmo madaxweynaha kaligii taliyaha wadankaas maamulo ee lagu magacaabo Pierre Nkurunziza.